Abriil | 2016 | WEEJIDOW
Archive for Abriil, 2016
Aqriso: Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Oo Maanta Magacaawey Taliyaha Ciidamada Booliska Gaarka Ah Ee MAAMULKA KOONFUR GALBEED
Abriil 30, 2016
WAAJIDPRESS – 30 APR 2016:
Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Shekh Aaden ayaa maanta waxa taliyaha Ciidamada Booliska Gaar ah Ee koonfur Galbeed Soomaaliya looga Magacaawey Mudane Gen. Maxamed Sheekh Cabdullahi – Akhri:
Akhriso then DAAWO Video dhameystiran: Gudoomiye Jawaari oo digniin kulul u direy Xildhibaanada iska maqan iyo Raisul Wasaare Cumar OO hortagay Baarlamaanka
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa Xildhibaanada ka maqan kalfadhiga 8aad u diray digniin ku aadan in beeshiisa iyo Guddiga doorashooyinka ee soo xulaya Xildhibaanada soo socda ay u gudbin doonaan inuu gudan waayay waajibkiisa qaran.
Jawaari ayaa qaati ka taagan maqnaanshaha joogtada ee Xildhibaanada, iyadoo kalfadhigan 8aad uu yahay kii ugu dambeeyay ee Baarlamaanka hada jira.
“Waxaa jirta Xildhibaano badan oo inoo diiwaan gashan ay maqnaashahooda badnaadeen, qof alla qofkii Xildhibaan ah oo ka maqnaada kalfadhigan 8aad, Guddoon ahaan waxaa goosanay in hadii xilkiisa uu gudan waayo inaan gaarsiineyno warbixintiisa Duubka asiga soo qoray iyo Guddiga doorashooyinka, si ay uga fiirsadaan in afar sano kale aan loo cusbooneysiin”ayuu yiri Guddoomiye Jawaari oo maanta ka hadlayay kulankii Baarlamaanka ee Ra’iisul Wasaaraha ku hor-geeyay hanaanka doorashooyinka.
Sidoo kale Jawaari ayaa ugu baaqay dhamaan Xildhibaanada inay soo wada galaan, maadaama laga doodayo masiirka jamhuuriyada Federaalka, waxaana uu mar kale ku celiyay in Xildhibaankii aan soo xaadirin kulamada soo socda loo aqoonsan doono Xildhibaan aan gudan waajibkiisa qaran.
Guddoomiye Jawaari ayaa dhowaan waxaa uu mamnuucay safarada dibadda ah ee Xildhibaanada uga ambabaxaan dalka, markii ay badatay Xildhibaanada safarada isaga maqan ee aan kalfadhiyada baarlamaanka soo xaadirin.
Dhinaca kale, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ayaa maanta u gudbiyey Golaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Hannaanka guud ee Geeddi Socodka Doorashada 2016.
Ra’iisul wasaaraha Xukumadda Fedraalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa maanta barlamaanka u gudbiyey qorshaha Xukumadda ee doorashooyinka dalka ee sanadkan ,waxaana ka mid ah in aqalka hoose ee Barlamaanka uu ka kooban doono 275 Xildhibaan kuwaasi oo lagu soo xuli doono hananka beelaha ee 4.5.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo shir gudoominayey ayaa ka codsaday golaha shacabka inay soo aqriyaan qorshahan, maalinta Isniinta ah ee soo socotana la sii ambaqaadi doono go’aanka ka gaarista qorshaha guud ee Hannaanka Doorasho – DAAWO SHIRKA OO DHAMEYSTIRAN:
War deg deg ah: Qarax galabta ka dhacay Magaalada Muqdisho
Qarax daryan xoogan sameeyay, ayaa waxaa galabta uu ka dhacay Magaalada Muqdisho, iyadoo la soo sheegaayo in qaraxaasi uu ka dhashay gaari nooca raaxada ah, oo lagu soo xiray.
Gaarigan oo markaasi uun ay ka daggeen laba qof oo la socotay, ayaa Parking ahaan u yaalay afaafka hore guri ku yaala xaafadda 1-da Maajo ee Degmada Waaberi.
Waxaan jirin wax khasaaro ah oo ka dhashay gaarigaasi. Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa Dhacdo.com u sheegay in gaarigaasi ay leedahay hooyo haysata carruur agoon ah, iyada iyo darawalkeediina ay ka wada badbaadeen qaraxaasi.
Mid ka mid ah dadka deegaanka, ayaa inoo sheegay in qaraxaasi uu burburiyay gaarigaasi, lamana garanaayo ujeedada ka dambeysa in la weeraro hooyadaasi.
Ciidamada Booliska & Nabad Suggida Gobolka Banaadir oo gaaray halka uu qaraxu ka dhacay, ayaa waxay xireen wadooyinka soo gala, waxayna ka wadaan baaritaano ka dhan ah qaraxaasi.
Hay’adaha ammaanka, ayaan wax war ihi ka soo saarin qaraxa galabta ka dhacay Degmadaasi, inkastoo ay u muuqdaan inay weli gacanta ku hayaan baaritaanada.
Billihii ugu dambeeyay, ayaa waxaa Magaalada Muqdisho ku soo badanaayay qaraxyada lagu soo xiraayo gaadiidka gaarka loo leeyahay, waxaana inta badan masuuliyadooda sheegata Al Shabaab.
Abriil 29, 2016
War deg deg ah: Daawo: Dhibaatada ay maraan dadka Fiisaha ka raadiya Qunsuliyada Itoobiya ee Garowe
Dadka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku nool deegaanada Puntland, ayaa dhibaato xoogan kala kulma qunsuliyada Itoobiya ee Garowe.
Dadkan ayaa marka ay Fiiso u doontaan qunsuliyada, waxay la kulmaan dhibaatooyin xoogan iyo quursi aad u xun – DAAWO:
Gaari Waxyaabaha Qarxa laga soo buuxiyey oo Muqdisho…………
Ciidamada amaanka Dowlada Soomaaliya ayaa gacanta u dhigay gaari la sheegay in waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, kaa oo la hordhigay Hotelka Royal ee kuyaala Xaafada Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Xog: Midowga Afrika oo ka fiirsanaysa Hawlgalka AMISOM iyo Ciiddanka kaga le’anayo SOOMAALIYA
Abriil 28, 2016
WAAJIDPRESS – 28 APR 2016:
Maqaal Falaanqeyn dheer leh oo maanta lagu soo daabacay Websaytka Wakaalladda Wararka Turkiga ee Anadolu Agency (AA) ayaa lagu xusay inay Midowga Afrika ka fiirsanayaan Hawlgalka ay ka wadaan Somalia oo ay dhibaato kala kulmeen muddo ku dhow 10-sanno.
Heerka dhimashadda ee Ciiddanka AMISOM soo gaaray ayaana sababtay inay inta badan Dowladaha ciiddanka ku yaboohay inay is-weydiiyaan Istaraatijiyadda Hawlgalka AMISOM, Taatikada iyo inuu Kharajkaasi u qalmo.
Machadka Cilmi-baarista Nabadda (The Stockholm International Peace Research Institute ) waxay ku qiyaaseen inay AMISOM ku waayeen Hawlgalka Somalia in ka badan 1,100 Askari muddadii u dhexeysay bishii January ee 2009-kii iyo bishii December ee sannadkii 2014-kii.
Xeeldheere Siyaaasadeed oo lagu magacaabo Muwanga Kivumbi ahna Sharci-sameeye u dhashay dalka Uganda ayaa u sheegay Wakaalladda Wararka ee Anatolu Agency in ay Ciiddamadda Caalamiga xal ku keeni la’ yihiin Hawlgalladda Millitiga.
Waxa uu tilmaamay inaan Xaalladda Somalia lagu xalin Karin iyadoo la adeegsanayo Xooggag Hubeysan oo keliya.
“Ma tegi kartid dal shisheeye adigoo wata Ciiddankaaga iyo qoryo, iyadoo ay ka maqan tahay Arrimo Siyaasadeed” ayuu yiri Muwanga Kivumbi oo dalkiisa ka mid yahay 6-da waddan ee ku deeqay Ciiddamo la dagaalama Alshabaab.
Waxa kale oo uu sheegay inay Somalia u yimaadeen si ay Europe ugu taageeraan Hawlgalka, wuxuuna intaasi ku daray inay Maraykanka cashar xun ka barteen Somalia sannadkii 1993-kii, isla markaana aysan doonayn inay Ciiddankooda khatar kale galaan.
Hawlgalkii Maraykanka ee Somalia waxaa looga dilay 18 Askari, lagana soo riday Diyaarad Black Hawk, waxayna guul-daradaasi soo dedejisay in Ciiddanka Maraykanka isaga huleelaan Somalia sannadkii 1994-kii.
DHAGEYSO: AFHAYEENKA ODAYAASHA DIGIL IYO MIRIFLE MALAAQ DEEROW OO SI KULUL UGA HADLEY DHIBAATADA LAGU HAYO SHACABKA DEGAN GOBOLKA SHEBEELAHA HOOSE
Dhawaanahaan Ayaa Waxaa Dhiwatooyin Ay Kajireey Degaano Iyo Degmooyin Katirsan Gobolka Shabeellaha Hoose Ee Koonfur Galbeed Somaliya Taasi Oo Lagu Haayey shacabka Dega Halkaasi.
Iyadoona Ay Ahayda Dhac Iyo Dilal Kala Duwan isla markaana La ogyahay In Dhawaan Halkaasi lagu Gubey Gurigooda Ay jifeen Dadka Ladiley Ayaa Waxaa Kujirey Carruur Aad U Da’yar Ay Jireen Midka Ugu Weyn iyo Midka ugu Yar Todobo Sano Iyo Todobo Billood Dhiwaatooyinkaasi Ayaa Waxaa Ka hadley Koonfur Galbeed Somaliya Dowlada Faderaalka Somaliya Iyo Caalamka Intiisa Kale.
Hadalkii Afhayeenka Odayaasha Digil iyo Mirifle Malaaq deeroow waakan ee nala dhegeysta:
Afhayeenka Malaaqyada Koonfur Galbeed Malaaq Deerow Mobil
Weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday hoyga uu Magaalada Cadan ka degan yahay Taliyaha Booliska (SAWIRRO)
Weerar ismiidaamin ahaa, ayaa waxaa maanta lagu qaaday hoyga uu Magaalada Cadan ka degan yahay Taliyaha Ciidanka Booliska Cadan, General Shelal Ali Shayyeh.
Nin naftii hurre ahaa oo la socday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa, ayaa isagoo xawaare ku kaxeynaaya ku soo weeraray hoyga Taliyaha, balse ilaaladiisii oo ku amartay inuu istaajiyo, ayaa rasaas oodda kaga qaaday.
Ninkaasi, ayaa waxaa la sheegay inuu dhegaha ka fureystay digniinihii ay siinayeen ilaalada Taliyaha, iyadoona uu gaarigu ku qarxay afaafka hore ee hoygaasi, markii rasaas lagu caabiyay wadihii gaariga.
General Shelal Ali Shayyeh, ayaa ka badbaaday weerarkaasi, balse waxaa ku dhaawacantay dhawr ruux oo uu ku jiro mid ka mid ah ilaaladiisii.
Weerarkan, ayaa waxaa uu ku soo beegmayaa, xilli maalin ka hor Ururka Al Qaacidda laga saaray Magaalada Xeebta Koonfurta Yemen ku taala ee Mukalla.
Ciidanka Dowladda Yemen oo gacan ka helaaya isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga, ayaa si buuxdo ula wareegay gacan ku haynta Magaaladaasi.
Ma jirto illaa iyo hadda cid sheegatay masuuliyadda weerarka fashilmay ee lagu qaaday hoyga Taliyaha Ciidanka Booliska Cadan, balse weerarada ceynkani oo kale ah waxaa looga bartay Ururada Daacish & Al Qaacidda oo dagaal ka wada dalkaasi.
R/wasaaraha oo Baarlamaanka looga yeeray & Xildhibaanada oo Safaradii dibada laga joojiyey.
WAAJIDPRESS- 28 APR 2016:
Pro: Jawaaari Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaliya ayaa maanta shaciyey amaro uu kusoo rogay safaradii xildhibanada baralamnka soomaliya ay ku aadi jireen Dalka dibadiisa.
Amarada gudoomiye jawaari uu kusoo ragay xildhibnada ayaa ahaa in maanta wixii k danbeya aysan jiri doonin in in Mudane ka tirsan Baralamnka uusan Safar dibad ah uga maqnaan karin kulamada golaha shacbka ay inta ka harsan Kal Fadhiga hada socda.
Gudoomiye Jawaari wuxuu u sababeeyeyamarkan in ay jiraan howlo badan oo horyaal Baralamaanka Soomaaliya kuwaas oo u baahan wax ka qabad, sidaasi awgeedna aan looga maarmin in Xildhibnada inay ka maqnadan kulamada uuBaarlamaanka yeelanayo.
Dhinaca kale Baarlamaanka Soomaaliya waxaa 30/April/2016 looga yeeray oo la doonayaa in uu Golaha soo hor joogsado R/Wasaaraha Soomaaliya Cumar C/Eashiid s wax looga weydiiyo hanaanka loo marayo Doorashada Sanadkaan dhamaadkiisa Soomaaliya ka dhici doonto.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Abriil, 2016.